IDolphin 6, inguqulelo entsha yesikhangeli sewebhu se-Android | I-Androidsis
Ukuba ungomnye wabasebenzisi be-smartphone be-Android abakhetha ukungasebenzisi isikhangeli sendalo senkqubo yokusebenza yeselfowuni kwaye bakhethe ukukhetha enye, esi sithuba sinokuba nomdla kuwe,
Ngokuqinisekileyo sele usazi isikhangeli seDolphin. Ewe, into entsha kukuba usetyenziso lwenguqulo yeDolphin 6 ye-Android sele isungulwe, evumela umsebenzisi ukuba afikelele kwizixhobo ezingaphezulu kwesikhangeli esiziswa yi-Android ngokungagqibekanga.
NgeDolphin 6 sinokufunda i-RSS ngokuthe ngqo kwisikhangeli, ngendlela ebizwa ngokuba yiWebzine. Ukongeza, esi sicelo sikuvumela ukuba uqwalasele iphepha lakho lasekhaya, ngokufikelela ngokulula kwiindawo zakho ozithandayo kunye nokwenzeka kokongeza iindaba.
I-Dolphin 6 ikwabonelela ngamathuba okongeza iinkqubo ezincinci kwisikhangeli sewebhu, ukwenza amava akho abe awakho kwaye uwasebenzise ngendlela othanda ngayo.
Kwelinye icala, le web browser ye-Android ivumela abasebenzisi bayo ukuba bagcine iphepha elipheleleyo lewebhu, enkosi onokuthi ufikelele kuwo nangaliphi na ixesha, nokuba awuxhunyiwe kwi-Intanethi.
Nangona kukho iibrawuza ezininzi ze-Android, kulungile ukwazi ezinye iindlela ezinokubakho xa kuthelekiswa nesikhangeli sendalo seqonga leGoogle, kwaye iDolphin 6 inomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » IDolphin 6, inguqulelo entsha yesikhangeli sewebhu se-Android
Kulungile hayi. Akukho nto kuloo nto. Andithandabuzi ukuba ngenye imini iyakuvela, kodwa loo mhla awukho namhlanje. Akukho sikhombisi kwiNtengiso, okanye kwiwebhu), nakwibhlog yesicelo). Ayithandi i-beta okanye i-alpha okanye nantoni na. Ukuba uyazi ukuba le nguqulo inokufumaneka phi, beka ikhonkco kwinto engekhoyo, inkosi.
Unxibelelwano oludlulisileyo luvela kwi-v5.1.
(Malunga nale app
I-2.0.1 okanye ngaphezulu
Inqanaba lokukhula eliphantsi)
Ke ngoko, ukuba i-v6 iphumile, ayikabikho kwimarike kwaye akukho ncedo kuyo kwiphepha lesicelo.
Ingxaki ikwezi zintandathu, ezingafumanekiyo.
USebastian Diaz sitsho
Ndishiya ikhonkco lwenguqulo 6, ise beta.
Phendula uSebastian Diaz
UCarlos RH Ruiz sitsho
Ndiyasithanda esi sikhangeli, kodwa asibonakali kwimarike. Ndinesixhobo esineengcambu (andazi ukuba ibalulekile na). Ngaba ukhona umntu onokundixelela ukuba ungayilungisa njani?
Phendula uCarlos RH Ruiz